YEYINTNGE(CANADA): Saturday, September 19
(မြန်မာ့မာန်ဟေ့....ကြိတ်ထား)နအဖကလည်းမောင်သောင်းဒီးကိုစံပြမြန်မာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်...ဓာတ်ပုံသတင်းစက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၉ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့အနီး မာကူဟာရီဒေသရှိ စက္ကူလေယာဉ်ပျံ ပြိုင်ပွဲတွင် သူ၏ လေယာဉ်ကို လေထဲတွင် ကြာနိုင်သမျှ ကြာအောင် ပျံဝဲနိုင်စေရန် လွှတ်တင်တော့မည့် မောင်သောင်းဒီး (Mong Thongdee)။ပြိုင်ပွဲရလဒ်များ ချက်ချင်း မသိရသေးပေ။ ပြိုင်ပွဲကို All-Japan Origami Airplane Contest ဟု အမည် ပေးထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဇာတိ မိဘ ၂ပါးက မွေးဖွားခဲ့သော မောင်သောင်းဒီးသည် နိုင်ငံမဲ့တဦး ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်စဉ် မောင်သောင်းဒီးကို မွေးဖွားရာ မွေးစာရင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံ မဲ့နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့အား ဂျပန်သို့ သွားရောက်ခွင့် ပြုမပြုကို ရက်အနည်းငယ်အကြာ အငြင်းအခုန် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထိုင်းအစိုးရက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောင်သောင်းဒီးသည် ထိုင်းနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။( ဓာတ်ပုံ - AP )http://moemaka.blogspot.com/ဂျပန်တွင် လက်စွမ်းပြသည့် စက္ကူလေယာဉ်ချန်ပီယံ တတိယဆု ဆွတ်ခူးဓာတ်ပုံသတင်းစက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၉ထိုင်းနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သောကြောင့် ထိုင်းတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ဘုရင် နှင့် မိဖုရား၏ ဓာတ်ပုံဖြင့် အောင်ပွဲဆင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။မောင်သောင်းဒီးသည် တဦးချင်း စွမ်းရည်ပြ ပြိုင်ပွဲတွင် ၁၀း၅၃ စက္ကန့်ဖြင့် တတိယဆု ရသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲမစတင်မီ စွမ်းရည်ပြစဉ်က သူ၏ လေယာဉ်မှာ ၁၆.၄၅ စက္ကန့်ကြာ လေထဲတွင် ၀ဲနိုင်ခဲ့သည်။ ပထမ နှင့် ဒုတိယ ဆုရှင် မည်သူများ ဖြစ်သည်ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်မလာသေးပေ။ယမန်နေ့က အုပ်စုလိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် သူပါဝင်သည့် ထိုင်းအသင်းက အနိုင်ရခဲ့သည်။ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသည် စက္ကူဖြင့် လေယာဉ်ပုံစံ ခေါက်ချိုးပြီး လေထဲသို့ လွှင့်တင်ကြရသည်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှ မိဘ ၂ပါးက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်စဉ် မွေးဖွားခဲ့သော မောင်သောင်းဒီးသည် နိုင်ငံမဲ့တဦး ဖြစ်သည်။ ထူးချွန်သည့် ၄ တန်းကျောင်းသား နိုင်ငံမဲ့နေသူအား ထိုင်းအစိုးရက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းကို နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းများက ယနေ့တိုင် ရေးသား ဖော်ပြနေကြသည်။ ( ဓာတ်ပုံ - AP )Mong wins third in individual eventand his team won the first in the team event in the same competition in Chiba of Japan.Mong isastateless boy who was born in Thailand to Burmese migrants. Mong, of Chiang Mai province, won paper plane competition in Thailand and was entitled to contest in Japan.However the Interior Ministry initially rejected his application to haveatemporary travel document to go to Japan on the grounds that he is stateless boy.Mong wins third in individual eventMong Thongdee, the stateless boy, won the third in the individual event in the All-Japan Origami Airplane Contest in Japan on Sunday.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတူမျက်နှာဖုံးများနှင့်တိုရန်တိုကU2 Live !
Canadian Friends of Burma get thousands of signatures at U2 Concerts in TorontoSeptember 17, 2009ဖိုင်ရယူရန်Burma Petition at U2 Concert Toronto Ottawa - A team of dedicated volunteers comprising of exiled Burmese dissidents and their Canadian supporters obtained thousands of signatures overatwo-day campaign blitz during U2’s Toronto stopover. The signatures are part ofapostcard campaign CFOB launched on the occasion of 21st anniversary of Burma’s democratic uprising. Signed postcards will be sent to the Prime Minister Harper urging Canada to continue the support for the Burmese people with humanitarian aid andabinding UN Security Council resolution. The highlight of both the Wednesday and Thursday sell-out shows was when U2 frontman Bono performed “Walk On,” the song he penned for Aung San Suu Kyi. While Bono sang, volunteers from Canadian Friends of Burma, Amnesty International - Canada and Bono’s NGO “One” marched to U2’s famous 360 degree stage. Among the dedicated CFOB volunteers walking on stage wearing Suu Kyi masks in front of 62,000 fans was Aung Tin, Canada representative of Suu Kyi’s National League for Democracy. CFOB executive Director Tin Maung Htoo was delighted by U2’s kind invitation to CFOB to do outreach at the show and says “This wasatremendous opportunity for us. We were able to spread the word about Burma to tens of thousands of people. I look forward to the day when U2 performs inafree Burma for Daw Aung San Suu Kyi”. For media contact, please call 613-297-6835 Summary only...
Voice of Burma (20 September Issue)
ဖိုင်ရယူရန် VOB727KK Summary only...